Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Fanampiana tadiavina ho an'ny United Airlines: Vaksiny irery!
Airlines • Aviation • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Interviews • Vaovao • Tourism • Fitaterana • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fepetran'ny vaksinin'ny United Airlines
Nanambara ny United Airlines androany fa hitaky ny hanaovana vaksinin'ny COVID-19 ny mpiasa raha tsy tara ny 25 Oktobra 2021, na mety ho faty izy ireo.
United dia lasa iray amin'ireo andiana orinasa vao tsy ela akory izay nametraka mandat ny mpampiasa azy ireo dia tsy maintsy manao vaksiny manohitra COVID-19.
Ara-dalàna ve izany? Azo roahina ve ny mpiasa iray satria tsy mety mankatò?
Misy mahasamihafa ny seranam-piaramanidina sy ny fivarotana amin'ny karazana asa hafa?
Keith Wilkes, mpiara-miasa / mpiara-miasa ao amin'ny orinasam-panjakana ao amin'ny Hall Estill, dia nandefa antso avy amin'ireo orinasa manandrana mahazo valiny amin'ny fanontaniana ara-dalàna momba ny United na tsia, na ny orinasa manoloana izany, afaka mandidy vaksininy ho an'ny mpiasa.
Wilkes dia mamaly fanontaniana manandanja sasany momba ny tsy mampiavaka ny fanambaràn'i United amin'ireo orinasa hafa izay nanao hetsika sahala amin'ity herinandro ity.
“Nanambara ny United Airlines androany fa manatevin-daharana ireo lisitr'ireo orinasa mitombo hatrany izay milaza amin'ny mpiasan'izy ireo ny hahazo izany vita vaksiny ho an'ny COVID-19 na very asa. Ny fanambaràn'i United dia manamarika ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana voalohany nampihatra mandat toy izany ho an'ireo mpiasa 80,000 ao aminy, izay manana hatramin'ny faran'ny volana oktobra ho avy porofon'ny vaksiny na, miaraka amina faningana tery vitsivitsy, hiatrika famaranana, ”hoy i Wilkes.
Ity misy bebe kokoa ny zavatra tsy maintsy nozarain'i Wilkes tamin'ny resadresaka iray:
F: Ny mpampiasa lehibe hafa tsy manome fitsaboana, toy ny Google sy Facebook, dia nanao fanambarana mitovy amin'ity herinandro ity. Inona, raha misy, ny manan-danja amin'ny fidiran'ny United ho laharam-pahamehana amin'ny fanaovana vaksiny ho an'ny mpiasany?
Wilkes: Ankoatry ny maha-voalohany azy amin'ny indostria iankinan'ny olona sy ny orinasa an-tapitrisany maro any Etazonia isan'andro, ny mpiasa United - tsy toy ny orinasa teknika sy banky - dia mpiasan'ny sendika. Amin'ny alàlan'ny fifanarahana fifampiraharahana iraisana sy ny lalàna mifehy ny asa federaly, matetika ny mpikamban'ny sendika dia mahazo fiarovana bebe kokoa amin'ny politika vaovao apetraky ny mpampiasa azy ireo izay mety hisy fiantraikany amin'ny fitazonana ny asany ny mpiasa.
F: Ahoana no ahafahan'ny United mametraka ny mandat ny vaksiny vaovao amin'ny mpiasa ao amin'ny sendika?